Mamely ny anatiny sy ivelany | NewsMada
Mamely ny anatiny sy ivelany
Tsy niomana? Saro-pantarina ny hamantarana ny avoaky ny ampitso. Misy koa anefa ny fiteny hoe “mila mahay miomana rehefa mitantana”. Mety hisy ny hiteny hoe “tsy mora ny mitantana”, mainka fa hoe raharaham-pirenena, fa aoka tsy hohadinoina fa andraikitra nekena izany. Amin’ny zava-drehetra, tsy maintsy misy ny mamy sy ny mangidy, ny soa sy ny ratsy, ny tombontsoa sy ny fatiantoka, sns.
Fifanekena nosoniavina ny fifanarahana amin’ny Vondrona eoropeanina sy ny firenena an-dalam-pandrosoana aty Afrika–Karaiba-Pasifika (ACP). Na iza na iza mpitondra eto amintsika, tsy maintsy manaraka ny fepetra vita sonia. Tombontsoa ny tsy fandoavana ny haba ny fanondranana entana mankany Eoropa. Takalony, tsy mandoa haba ihany koa ny entana avy any Eoropa, toy ny lamba tonta (fripy) sy ny fiarakodia vaovao na efa niasa, ohatra. Hidina ny vidin’ireo entana miditra malalaka ireo aty Madagasikara, ary hitombo ny mpandraharaha hamorona orinasa, hiteraka asa ho an’ny Malagasy efa miaina anaty fahantrana. Tambiny, ho potika ny mpamokatra madinika, toy ny mpanjaitra akanjo eto an-toerana, efa nisedra olana hatramin’izay, manoloana ny vita sinoa, mamatsy ireo mpivarotra amoron-dalana.
Hihena koa ny vola miditra anatiny amin’ny fanjakana, amin’ny alalan’ny hetra. Afon’ampombo mikotrika amin’ny raharaha anatiny ny “tsy fahampian’ny famatsiam-bola avy any ivelany”. Mitaky fepetra maro izy ireo, ary nanome fe-potoana mihitsy enim-bolana, tokony ho tapitra hatramin’ny volana avrily ho avy izao. Anisan’izany ny ahazoana vokatra azo tsapain-tanana mikasika ny ady amin’ny kolikoly, ny fanjakana tsara tantana, ny fitsinjovana ny daholobe, indrindra ny sosialim-bahoaka.
Olana anatiny hafa, manodidina an’ireo ny lafiny andramena, anisan’ny takin’ny vondrona iraisam-pirenena, toy ny Cites, ny ahazoana vokatra mivaingana ny hamaizana ny tena atidoha mpanao trafika, fa tsy hihazakazaka amin’ny fivarotana ny tahiry nogiazan’ny fanjakana.